Maxkamadda Racfaanka ee Amsterdam: Scythian Gold waxaa iska leh Ukraine
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » Maxkamadda Racfaanka ee Amsterdam: Scythian Gold waxaa iska leh Ukraine
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • dhaqanka • Education • Entertainment • Wararka Dowladda • Wararka Nederland • News • Dadka • Waajib ah • Wararka Ruushka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Ukraine War Deg Deg Ah
Maxkamadda Amsterdam: Ururinta Dahabka Scythiyaanka waxaa iska leh Ukraine.
Bishii Disembar 2016, Maxkamadda Degmada Amsterdam waxay xukuntay in hantida dahabiga ah ee Scythian lagu soo celiyo Ukraine iyadoo lagu saleynayo sharciyada Holland iyo xeerarka caalamiga ah. Bishii Maarso 2017, matxafyada Crimea ayaa gudbiyay racfaan ka dhan ah go'aanka.
Maxkamada Holland ayaa xukuntay in aruurinta Dahabka Scythiyaanka lagu wareejiyo Ukraine.
Ururinta Dahabka Scythiyaanka waxay xukuntay inay qayb ka noqoto dhaxalka dhaqanka ee Gobolka Yukreeniyaan.
Waajibkii Allard Pierson Museum ee ahaa inuu soo celiyo qaybaha madxafyada madxafyada Crimean waa dhammaaday.
Garsooraha maxkamadda Pauline Hofmeijer-Rutten ayaa maanta ku dhawaaqday in Amsterdam Rafcaanka ayaa xukuntay in Dahabka Scythian ururinta waa qayb ka mid ah dhaxalka dhaqanka ee Gobolka Yukreeniyaan, oo waa in lagu wareejiyo Museum Allard Pierson in Fund State Museum ee Ukraine.
"Maxkamadda Racfaanka ee Amsterdam waxay xukuntay in Matxafka Allard Pierson uu ku wareejiyo 'khasnadaha dambiyada' ee dawladda Yukreeniyaan," Hofmeijer-Rutten ayaa yidhi, isaga oo intaa ku daray in farshaxanku ay yihiin "qayb ka mid ah dhaxalka dhaqanka ee gobolka Yukreeniyaan" iyo "Waxaa iska leh qaybta dadweynaha ee Sanduuqa Matxafka Gobolka ee Ukraine."
Maxkamaddu waxay sidoo kale sheegtay in Masxafka Allard Pierson "waajibkii lagu soo celin lahaa qaybaha madxafyada madxafyada Crimean ay dhamaatay."
The Dahabka Scythian ururinta in ka badan 2,000 oo walxood ayaa lagu daawanayay Matxafka Allard Pierson ee Jaamacadda Amsterdam intii u dhaxaysay Febraayo iyo Agoosto 2014. Ka dib markii Ruushku ku daray Crimea Bishii Maarso 2014, hubanti la'aanta ururinta ayaa kacday iyada oo labadaba Ruushka iyo Ukraine ay sheegteen bandhigyada. Arrinkan, Jaamacadda Amsterdam waxay hakisay wareejinta ururinta ilaa inta si sharci ah loo xalinayo khilaafka ama dhinacyadu ay ka heshiiyaan.
Bishii Disembar 2016, Maxkamadda Degmada Amsterdam waxay xukuntay in hantida dahabiga ah ee Scythian lagu soo celiyo Ukraine iyadoo lagu saleynayo sharciyada Holland iyo xeerarka caalamiga ah. Bishii Maarso 2017, CrimeaMatxafyada ayaa gudbiyay rafcaan ka dhan ah go'aanka.
Bishii Maarso 2019, Maxkamadda Amsterdam ee Racfaanka waxay laashay go'aankii maxkamadda degmada laakiin waxay dib u dhigtay xukun kiiska, iyadoo ka codsatay dhinacyada inay bixiyaan dukumeenti dheeraad ah.